Indlela yokukhusela umdlavuza webele
Impembelelo ye-vitamin D ekukhuseleni umdlavuza webele.
Kwiminyaka yakutshanje, kukho utshintsho kwiipaladigms kwiyeza, njengoko uphando olutsha lubonakalisa imiphumo emihle ye-vitamin D emzimbeni womntu. Ukuthintela ukukhutshwa kwabantwana kungeyona yodwa injongo yeVithamini D. Amanqanaba ama-Vitamin D (40-80 nanograms / ml) akwandisa ukudala nokusebenza kwamaseli enempilo kuwo wonke umzimba.
Ukongezelela ekukhuseleni amathambo nasekuphuculiseni umzimba wokuzikhusela, iimvavanyo zibonisa ukuba i-Vitamin D inceda nokukhusela ezinye i-cancer, ezibandakanya izitho ezinjenge-grey gland, i-ovari, i-prostate kunye ne-sphincter ye-anus. Ucwaningo olutsha olunomdla lubonisa ukuba eUnited States yedwa, amawaka amatsha omhlaza wesifuba angasenqatswa rhoqo ngonyaka ukuba ngaba besetyhini abaninzi babe nezinga eliphezulu le-vitamin D.
Ucwaningo lwe-vitamin D oluqhutywe nguCedric Garland kunye nezinye iinzululwazi ezivelele kubonisa ukuba abafazi abanezinga le-vitamin D ngaphaya kwama-nanogram / mL ama-52 banesiqingatha ithuba lokuvelisa umdlavuza webele kunabo abo amanqanaba e-vitamin D angadlulanga ama-nanogram / mL ayi-13 !! UDkt. Garland uqikelele ukuba ama-58,000 amatyala omtsha wesibeletho e-United States angakhutshwa rhoqo ngonyaka, kuphela ukuphakamisa izinga le-vitamin D ukuya kuma-nanogram / mL ama-52. Khawucinge ukuba yintoni impembelelo yelizwe elivela kuloo nto ibonakala ingabalulekanga!
Iqondo le vithamini D.
Ukuhlolwa kwegazi elula kukufuneka ukuba ukwazi iqondo lakho levithamini D. Kwiminyaka emihlanu edlulileyo, uluhlu lwe-nanogram / 20 ml oluthatyathwa luqhelekile. Kule nje nje, le nqanaba laphakanyiswa kwi-nanograms 32-100 / ml. Ungakulibali ukubuza ugqirha wakho ukuba ungakanani uqobo lwevithamini D ekuhlaleni okulandelayo. Ngokuqhelekileyo, abafazi baxelelwa ukuba amazinga abo aqhelekileyo, nangona inqanaba langempela linokude lide.
Ukuba izinga lakho le-vitamin D liphantsi, indlela efanelekileyo yokunyusa ngokukhawuleza ithatha i-vitamin D3. Qala ngo kwamkela ama-5,000 amayunithi aqhelekileyo ngosuku. Emva kokufikelela kumgangatho ophilileyo, kucetyiswa ukuba uthathe i-UU 1,000-2,000 ngosuku. Ewe, kunzima ukufumana inani levithamini elifunekayo ngumzimba kuphela ngokutya okudliwayo. Isitya seentlanzi sinikela kuphela i-EU engu-300 ukuya kuma-700, ingilazi yobisi kuphela i-UE UE.
Usenokumangaliswa ukwazi ukuba ilanga ngokwenene livela kumthombo ongcono kakhulu we-vitamin D. Imilambo yelanga ivumela imizimba yethu ukuba ivelise i-vitamin D kwinqanaba leoli phantsi kwesikhumba, ukuba ungasebenzisi i-suncreen. Umzimba unako ukuvelisa i-vitamin D ngokwaneleyo ilanga unyaka wonke kwaye awuyi kuvelisa ngaphezu koko kuyimfuneko, kungakhathaliseki ukuba ungaselanga ixesha elingakanani. Nangona sitsheliwe malunga neengozi zokutshatyalaliswa kwelanga ngokugqithiseleyo, i-tan enomzimba ihlala inenzuzo kumzimba. Oku kungachaza ukuba kutheni isifo somhlaza wesifuba siphezulu kwiindawo ezisemantla kunentla kwi-equator.
Izazinzulu kunye noogqirha bancomela ukuba yonke intokazi ibhekise rhoqo kwizinga lakhe le-vitamin D kwaye ligcine eli lifanelekileyo. Akunzima kunzima, kuthatha malunga nama-2,000 UE vithamini D3 ngosuku kwaye rhoqo usebenzisa ixesha phantsi kwelanga. (Unokwazi ukutyelela i-solarium efanisa ukukhanya kwelanga.) Isifuba sakho kunye nomzimba wakho wonke uya kuzuza kuyo. Oku kuyona thintelo enokuzifumana.
Le ngcaciso ayijoliswanga ngokuqwalasela, ukuxilonga, ukunyanga okanye ukuthintela nasiphi na isifo. Zonke izinto ezikule nqaku zenziwa kuphela ngeenjongo zemfundo. Njalo ufune ingcebiso ngugqirha kuyo nayiphi na imibuzo enayo malunga nesi sifo okanye ngaphambi kokuba wenze nayiphi na inkqubo yezempilo okanye ukutya.
I-Raspberry kumachiza omntu
Unyango lwezifo zesibindi izilwanyana zabantu
Ukupholisa iipropati ze-Irgi
Ukunyanga kwamayeza kunye ne-osteochondrosis
Iimpawu zokuhlamba kwiingubo: ukuhlaziya
Ukunyamekelwa kwesikhumba emva kwama-30, izilwanyana zabantu
Ubuhle-izandi ezintsha ze-EIMI iimveliso zeenwele ezivela kwi-Wella Professionals
I-cherries e-sweet in batter
Isobho seklabishi ngeeshizi ecibilikiweyo
Indlela yokubukeka ibambe isifuba?
Ubomi obini: indoda kunye nomthandi
Ishokolethi enentlungu: ekhangayo kwaye inenzuzo!
Ukutya kwiqela legazi